PressReader - Ilanga: 2018-02-15 - LINGCOLILE IDOLOBHA INEWCASTLE
LINGCOLILE IDOLOBHA INEWCASTLE
Ilanga - 2018-02-15 - Imib - Zamani Eric Madi Masondeza Farm NEWCASTLE
MHLELI: Liyangcola idolobha lethu iNewcastle, ngisho uhamba emgwaqweni uzwa iphunga lomshobingo odabula ukhakhayi!
Kwazona nje lezi zindawo ezisetshenziswa wumphakathi zokuzikhulula, uvele udibane namanzi exhaxhaza kusukela emapayipini ayophuma ngomnyango, uvele ungazi noma kumele weqe ngaphezulu uyozikhulula kunjalo.
Ngiyalikhumbula idolobha lethu iNewcastle elake ladla umhlanganiso ngokuhlanzeka izikhathi eziningana, manje usungawa bhu phansi ngenxa yokungcola kwalo.
Kwalaba abaqashwe wumasipala ngenhloso yokulihlanza, kungathi kabawenzi nje lowo msebenzi. Kudala amakhehla nezalukazi ayehlanza leli dolobha, lalihlala lihlanzekile, manje kuthiwa imisebenzi mayinikwe intsha.
Kuyamangaza-ke ukuthi yintsha lena engakwazi kanjena ukuhlanza idolobha ekubeni kwamali eyiholayo inomehluko kakhulu kule eyayiholwa ngomkhulu ababekhuthele kodwa behola uzuka.
Hhayi bakithi, kangiqonde khona ukugxeka ukuqashwa kwentsha nabesifazane, kodwa kwanawo nje umphakathi wonkana sewaphenduka amanuku nje avele alahle noma kuphi kodwa ibe ikhona imigqomo yokulahla udoti. Umane ufice endala indoda lena enezingane incike ngodonga ishobinga, ixakwe wuphuzo oludakayo lolu oseluphuzelwa noma kuphi, kawusaboshwa.
Umasipala ake ubheke kahle laba bantu abahlanza idolobha ukuthi bayalihlanza na, kubhekwe le migqomo kadoti ukuthi iyathuthwa okanye isekhona yini. Nohulumeni ake ubukisise lo mthetho wotshwala obuphuzelwa noma kuphi ngoba umuntu ophuzile vele uchama noma nini nanoma yikuphi.